Intelekelelo idubula phezulu njengamakhowa ... Ilungele abahambi abangatshatanga, abahambi ngebhayisekile, abakhweli, abathandanayo kunye neeLancers. Okanye mhlawumbi umzali obalekayo okanye ukubaleka nje ukuya kumahlathi omlingo aseBelfast. Ukubaleka emhlabeni kunye nazo zonke izibonelelo ozifunayo ukuze ukhululeke. Iigadi kunye nendawo yangaphandle ihlala iguquka njengoko singena kwisizini yethu yesibini. Le yikhabhathi eyi-12' x 12' (240 square feet) Inazo zonke izinto onazo ukuze ukhululeke kodwa sicebisa le ndlu kubahambi abakhululekileyo kwindawo encinci :)